संगीत नियोक्लासिकिज्म - यो अन्तिम शताब्दीको शैक्षिक संगीत निर्देशन सङ्केत गर्छ कि एक प्राविधिक शब्द हो। यसको प्रतिनिधिको शैली सांगीतिक XVII-XVIII शताब्दीयौंदेखि अनुकरण गरेका छन्। विशेष गरी लोकप्रिय प्रारम्भिक शास्त्रीय संगीत को काम, र पनि लेट बारोक थिए। 20 औं शताब्दीको संगीतकार को यो शैली आफ्नो राय, को भावनात्मक अधिभार र लेट Romanticism को संगीत परिष्कृत प्रविधी पनि विरोध गर्न खोजे। सबैभन्दा यस क्षेत्रमा लोकप्रिय आनन्द 1920-30-एँ।
नियोक्लासिकिज्म को विशेषताहरु
आफ्नो शैली मा संगीत नियोक्लासिकिज्म नव-बारोक निर्देशन संग धेरै समान छ। तिनीहरूलाई बीच सीमा धेरै धमिलो छ। यो रचयिता दुवै ऐतिहासिक अवधि अक्सर मिश्रित stylistic र शैली सुविधाहरू छ भन्ने तथ्यलाई गर्न धेरै हदसम्म कारण छ।
आजकल, शब्द "नव-शास्त्रीय" संगीत सामान्य छ। विशेषज्ञहरु परिभाषित त्यसैले, पहिले, को बारोक र विनीज क्लासिक को अनुकरण, साथै romanticism भन्दा अन्य अन्य ऐतिहासिक अवधि तथाकथित सौंदर्य नवीकरण।
musicologist Levona Akopyana अनुसार, वर्तमान अनुसन्धानकर्ताहरूले कहिलेकाहीं अचाक्ली नव-classicism को अवधारणा, यो मा सहित 20 औं शताब्दीमा बनेको थियो जो संगीत, अधिकांश विस्तार गर्नुहोस्। र अक्सर यो अग्र-दल न त न त modernism को अवधारणा मा फिट गर्दैन।
संगीत नियोक्लासिकिज्म को प्रतिनिधिहरु
प्रारम्भिक XX सताब्दी - नियोक्लासिकिज्म, छलफल लेट XIX मा लेट Romanticism को मध्यम शाखा प्रतिनिधित्व गर्ने रचयिता जस्ता क्षेत्रको progenitors। तिनीहरूमध्ये - जोहानिस Brahms, क्यामिली सेन्ट-Saëns, अलेक्जेन्डर Glazunov।
केही चिरपरिचित रचयिता को 19 औं शताब्दीको दोस्रो आधा शास्त्रीय शैली अनुकरण गर्न थालेका छन्। यस्तै रुझान "इंटेरमेस्सो क्लासिक शैली मा" Modesta Musorgskogo, मौरिस Ravel द्वारा "प्राचीन minuet" अवलोकन छन्।
मा 20 औं शताब्दीको संगीत नियोक्लासिकिज्म पहिलो प्रतिनिधिको सर्गेई Prokofiev "शास्त्रीय सिम्फनी", र एरिक Satie, "Bureaucratic Sonatina" लेखे गर्ने, Sonatina Muzio Clementi parodied जो संग थाले।
नियोक्लासिकिज्म को व्याख्याहरु
यस्तो घरेलू विशेषज्ञहरु Galina Filenko धेरै musicologists, यो विनीज क्लासिक को एक stylization रूपमा देखेर छैन "पुरातन विषय" को embodiment रूपमा नियोक्लासिकिज्म व्यवहार गर्छन्।
एकै समयमा Filenko प्राचीन रचयिता को तथाकथित आत्मा को Gregorian psalmody प्रयोग recreated कि टिप्पणी। यो जो यो Gregorian गाउन बुझाउँछ आफ्नै शब्द छ - यो डिजाइन, रोमन क्याथोलिक चर्च मा लोकप्रिय odnogolosoe।
नियोक्लासिकिज्म एउटा उदाहरण
समयमा, यो नव-शास्त्रीय संगीत मा धेरै लोकप्रिय थियो। यो प्रवृत्ति को प्रतिनिधिहरु संगीत को विकास मा आफ्नो चिन्ह बाँकी। एक नियोक्लासिकिज्म को प्रमुख प्रतिनिधिहरु को - एरिक Satie र आफ्नो सिम्फोनिक नाटक "सुकरात।" यो काम मा Eccentric फ्रान्सेली रचनाकार गीत प्लेटो गरेको दार्शनिक कामबाट फ्रान्सेली अर्क अनुवाद समावेश जो, soprano र अर्केस्ट्रा लागि चक्र गरे "संवादलाई।"
विशेषज्ञहरु Satie, स्पष्ट र अभिव्यक्तिमा संक्षिप्त द्वारा प्रयोग गरिन्छ जो संगीत को भाषा, कि दर्शाउन। काम, एक कोठामा अर्केस्ट्रा, एक साना संलग्न stringed साधन को लगभग विशेष अप गरे। यसको मद्दत गायक पार्टीसँग छैन सबै ध्वनि को एक सख्त र गंभीर वर्ण तोडने बिना ताजा ध्वनि,।
संगीत Satie विवरण पाठ मेल खाने सुनिश्चित गर्न खोज्नु छैन भन्ने तथ्यलाई द्वारा प्रतिष्ठित। संगीतकार मात्र सामान्य वातावरण र पर्यावरण पहुंचाता। यस मामला मा, औसत तापमान लगातार नाटक भर भावना राखिएको छ।
यी manifestations मा Sachi को पुनर्जागरण को कलाकार नजिक छ। उदाहरणका लागि, Sandro Botticelli, Fra Angelico। र XIX सताब्दी चित्रकार Puvis डे Chavannes, उहाँले विशेष गरी एक प्रारम्भिक उमेर मा, आफ्नो मनपर्ने रूपमा मानिन्छ जसलाई पनि।
यी सबै कलाकार, भर्खरै Sati जस्तै, केवल चित्रकला मा, एकता को छवि समस्या डरलाग्दा भिन्नताहरूलाई, साना स्ट्रोक, को तथ्याङ्कले को symmetrical व्यवस्था हटाइ द्वारा हल।
एरिक Satie को शैली
Sati - को Neoclassical र शास्त्रीय अग्र-दल संगीत को उज्ज्वल प्रतिनिधि। "सुकरात" - उहाँले आफ्नै, अद्वितीय शैली, लगभग संगीत को आफ्नो मुख्य टुक्रा भर अत्यन्तै रोकी भावना द्वारा विशेषता छ जो सिर्जना गर्छ।
उहाँले अक्सर नियमित वैकल्पिक र बारम्बार जो अभिव्यक्ति को माध्यम को एक किसिम, प्रयोग गर्दछ। यहाँ र Textured चित्रहरू, र चिल्लो हर्मोनिक अनुक्रम। एक वा दुई घडी चक्र - मनसाय र शिक्षा संगीतकार धेरै सानो कक्षहरू मा विभाजन गरेको छ। एउटै symmetrical पुनरावृत्ति दोश्रो देखि सिर्फ एक छोटो दूरी मा। भविष्यमा, प्रयोग र Sati अन्य थुप्रै अनुयायीहरू, संगीत नियोक्लासिकिज्म प्रतिनिधिहरु यो संरचनात्मक र भावनात्मक तरिका हो। रचयिता सही दिशा को फ्रान्सेली संस्थापक मध्ये एक मानिन्छ।
यो नियोक्लासिकिज्म संगीत को विकास मा, देश जसमा यो निरन्तर परिवर्तन विकास भएको थियो कि उल्लेख गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सुरुमा यो युरोपेली अमेरिका को भाग्य, को XX सताब्दी को शुरुवात थियो भने, यो प्रवृत्ति धेरै प्रतिनिधिहरु रूस को क्षेत्र मा देखियो।
एउटै शैली को variability लागू हुन्छ। र यो आफूलाई सांगीतिक नियोक्लासिकिज्म Satie को संस्थापक गरिरहेको। 1917 मा, त्यो आफ्नो प्रसिद्ध र scandalous ब्यालेट "परेड" जारी। यो उत्पादन भाग लिन समय धेरै सेलिब्रेटीहरू एक हात थियो: जीन Cocteau लेखिएको libretto सेट डिजाइन पाब्लो Pikasso मा काम, मुख्य भूमिकाको लियोनिद Massine र लिडियाले Lopuhova द्वारा प्रदर्शन गरेका थिए।
यो काम को षड्यन्त्र प्रदर्शन farcical सर्कस विवरण थियो। तिनीहरूले त्यो एक सर्कस पाल व्यवस्थित छ जो आफ्नो विचार, हेर्न सकून् भनेर, सार्वजनिक आकर्षित लागि संघर्ष गर्दै छन्।
जारी एक वर्ष पछि सिम्फोनिक नाटक "सुकरात" को "परेड" बाट markedly फरक छ। Sati संसारको अन्त आधिकारिक "सुकरात" स्थायी सबै क्लासिक सादगी फर्कन निर्णय भनेर बताउँदै एक ब्रान्ड नयाँ उत्पादन, प्रस्तुत गर्न तयार छ, तर एकै समयमा आधुनिक संवेदनशीलता कायम राख्न बताए।
"सुकरात" को प्रीमियर 1918 मा भएको थियो। त्यतिबेला यसलाई मा आधुनिक शास्त्रीय संगीत नयाँ शब्द भयो। धेरै कला प्रेमीहरूको यो नयाँ उत्पादन Satie संग खुसी थिए।
नियोक्लासिकिज्म को विकास
एक कलात्मक आन्दोलन 1920 मा व्यग्र मा सुरु रूपमा संगीत नियोक्लासिकिज्म बुझ्ने। यो इटालियन संगीतकार Ferruccio Busoni एक कार्यक्रम लेख, "नयाँ Classicism" प्रकाशित कि त थियो। उहाँले लोकप्रिय musicologist बेकर गर्न गरिएका जो खुला पत्र, को रूप मा यो गरे। यस लेखमा यो सांगीतिक निर्देशन लागि कार्यक्रम भएको थियो।
नियोक्लासिकिज्म को संस्कृति मा शक्तिशाली विकास रूसी संगीतकार थियो Igorya Stravinskogo। "द rake गरेको प्रगति", "Pulcinella", "Orpheus," "अपोलो Musaget" - उहाँले आफ्नो जीवन्त र स्मरणीय काम विशेष प्रस्ट थियो। पनि नियोक्लासिकिज्म को प्रवर्द्धनमा हात फ्रान्सेली संगीतकार अल्बर्ट Roussel राखे। यसलाई आफ्नो संगीत आदर, शब्द प्रयोग आधिकारिक पहिलो थियो छ। यो 1923 मा भयो।
सामान्यतया, यस्तै शैली मा XX सताब्दी को पहिलो आधा थुप्रै रचयिता काम गरे। जर्मन नव-शास्त्रीय संगीत मा नियोक्लासिकिज्म विकास पावलले Hindemith। Ottorino Respighi र अल्फ्रेडो Casella - फ्रान्स, यो Dariyus Miyo र फ्रान्सिस Poulenc, इटाली थियो।
मा गैर-शैक्षिक संगीत प्रयोग
हालैका वर्षहरूमा नव-शास्त्रीय संगीत निर्देशन लगभग गैर-फिर्तीयोग्य छ। हुनत XXI सताब्दी मा, अवधि थप र प्राय समाचार पत्र र पत्रिका संगीत को पृष्ठ फेला भएको छ। तर, यो गलत छ। आज सांगीतिक नियोक्लासिकिज्म अक्सर इलेक्ट्रनिक्स, पप र रक क्षेत्रमा संग शास्त्रीय संगीत को एक सुरिलो संयोजन को एक विशेष संश्लेषण उल्लेख छ।
सबैभन्दा लोकप्रिय आधुनिक यो संगीत को दिन मा रूपमा प्रतिनिधिहरु, एकै समयमा जब मात्र पुनर्जीवित नियोक्लासिकिज्म, इटाली र फ्रान्स ले।
Aznavur Sharl: जीवनी, रचनात्मकता र फ्रान्सेली गीत को सबै भन्दा राम्रो गीतहरू
म Janna friske कति वर्ष आश्चर्य?
Voronin Aleksandr: जीवनी र काम
महिला मा वृद्धि टेस्टोस्टेरोनको कारण। टेस्टोस्टेरोन कसरी कम
चुरोट दबाब वा कम वृद्धि? दबाब मा निकोटीन को प्रभाव
छोराछोरीको रगत नमूना लागि नुकीला के हो?
Hoakin Feniks: अभिनेता को Filmography र व्यक्तिगत जीवन
अभिनेत्री मारियाना Arias (मारियाना Arias): जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, चलचित्र
क्लब सूर्य स्वर्ग परिवार4* (टर्की, अलान्याक, कोनाकली): वर्णन, सेवा, समीक्षाहरू
को खिडकी मा एक तरकारी बगैचा। के एक खिडकी मा हुर्केका गर्न सकिन्छ?